Ngaba abarhwebi baya kuyisebenzisa njani iNyaniso eNdisiweyo? | Martech Zone
Ukucinga ukuba kule minyaka ilishumi izayo, iimoto kunye nezixhobo eziphathwayo ziya kufakwa ngokupheleleyo Nyaniso eyongeziweyo inika umdla. Ndisebenzisa ukukhangela ukuze ndifike naphi na emotweni yam kwaye andinakulinda de izinto ezibonwayo zisuke kwiscreen esincinci kwisixhobo sam esiphathwayo okanye kwiscreen sokuhambisa imoto yam ... kwisigqubuthelo sefestile yam egcina ujoliso lwam ekuqhubeni kunokujonga ngasemva nangaphezulu. Ukuvela kweedilesi kunye nolunye ulwazi olubalulekileyo lupholile kakhulu ukuba ungacinga ngalo.
Inyaniso engathandabuzekiyo yitekhnoloji yedijithali egqume umbhalo, imifanekiso okanye ividiyo kwinto ebonakalayo. Kwinqanaba layo, i-AR ibonelela ngazo zonke iintlobo zolwazi ezinje ngendawo, isihloko, ukubonwa, iaudiyo kunye nedatha yokukhawulezisa, kwaye ivule i-avenue yempendulo yexesha-lokwenyani. I-AR ibonelela ngendlela yokuvala umsantsa phakathi kwamava omzimba kunye nedijithali, ukuxhobisa iimveliso ukuba zibandakanyeke ngcono kubathengi bazo kwaye ziqhube iziphumo zeshishini lokwenyani kwinkqubo.
Ngokuphathelele kwintengiso, andiqinisekanga ukuba iya kuba yintengiso enkulu njengoko abaninzi bekholelwa. Ndicinga ngobunyani obungathandabuzekiyo njengamava omsebenzisi kunye nesicwangciso sokuzibandakanya, hayi isixhobo sokuthengisa. Umzekelo, kunokuba kupholile ukusuka kwinkcazo yemveliso kwindawo okanye iphepha ukuze ubenakho ukubona apho imveliso ifumaneka kufutshane. Okanye ukuya kulwazi ukuya kuthethathethwano olunxibelelanayo. Kuba itekhnoloji entsha, epholileyo, iinkampani eziyifaka namhlanje zibona iziphumo ezintle. Njengoko isiba yinto ephambili, andiqinisekanga ukuba izakuhlala. Ndingaphazama, nangona kunjalo.
Olunye uncedo lwale mikhankaso ngoku kukuba kufuneka ubhalisele isicelo ukuze ujonge ukuphuculwa. Oko kuthetha ukuba bayazi ukuba uphi kwaye ungubani xa ujonga umkhankaso we-AR. Khuphela IAurasma yakho iOS or Android isixhobo kwaye walatha kumfanekiso ongezantsi kunye nokusetyenziswa kwawo.
tags: urhweboNyaniso eyongeziweyoaurasmaezimotweniiblippariglasi kaGoogleinnovegastudio kalloculalaintengiso armetaioIlensi yesixeko sikaNokiaqualcomm vuforiaumnxebaukuntywiliselwa ngokupheleleyovuzixwikitudezappar
Uyenza njani into yokuba uMxholo wakho wabelwane ngakumbi
Iza kuba njani i-Intanethi kule nkulungwane izayo?